नेत्रविक्रम चन्द समूहकाे राजनीति किन र केका लागि? पावर र पैसाका निम्ति नहाेस्; पुर्व लडाकु – Digital Khabar
२१ फाल्गुन, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द खुल्ला राजनीतिमा आउने समाचारले नेपाली राजनीतिमा हरियाे झन्डा देखाउने हाेडमा छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द समूह र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि नागरीक खुसी भएका छन् । १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । पुनः चन्द समूहले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि पुरै नेपाली त्रसित बनेका थिए ।
के अब नेपालमा असन्तुष्टिको राजनीति पूर्णविराम लागेकै हो ?
विप्लव असन्तुष्ट राजनीतिक खेमाका अन्तिम पात्र हुन् ?
भए यसको ग्यारेन्टी कसले गर्छ ?
खुल्ला राजनीतिमा आएका मध्ये विप्लव अपवाद पात्र हुन्छन् ?
कम्युनिष्टससंगै फरक मत राखेर विद्रोह गरेका उनको भावी राजनीतिक रोडम्याप के हो ?
नेपालमा कम्युनिष्टका लागि कम्युनिष्ट नै खतरा हो । हिजो दशकौं कुम जोडेका नेताहरु आज एक अर्कालाई सिध्याउने षडयन्त्रमा जुटेका छन् । केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवा देख्ने कम्युनिष्टका लागि यो भन्दा ओरालो यात्रा अरु हुनै सक्दैन् । त्यसैपनि दुई तिहाई जनमतप्राप्त ओली सरकारलाई खरानी बनाउने खेल आफैंमा विडम्बना हो ।
सुशासन त्यो हो
जहाँ राज्यका क्रियाप्रति कमभन्दा कम प्रतिक्रिया आउन् । त्यो बाटोबाट राजनीति च्यूत भइसकेको छ । अब बाँकी आत्मरति मात्रै हो । किताव र घोषणापत्रमा लेखिएका आश्वासन उपलब्धि होइनन् । उपलब्धि त अनुभूतिमा आउनुपर्छ ।
जसरी प्लास्टिकको फूलमा मौरी आकर्षित हुँदैन, त्यसरी नै घोषणापत्रमा लेखिएका विषयको स्वामित्व जनताले लिँदैनन् । घोषणापत्र जनताको हाँसो फुल्नुपर्छ । नत्र कुनै दल भूमिगत हुनु या खुल्ला राजनीतिमा आउनुको अर्थ रहँदैन् ।